ပြိုင်ပွဲပြီးသွားလည်း အမြဲတမ်းသီချင်းဆိုနေမှာပါဆိုတဲ့ သားငယ်.. အားပေးမယ့်သူတိုင်း Share ပေးနော်..။ - APANNPYAY
Home / Myanmar Idol / အဆိုတော်များ / ပြိုင်ပွဲပြီးသွားလည်း အမြဲတမ်းသီချင်းဆိုနေမှာပါဆိုတဲ့ သားငယ်.. အားပေးမယ့်သူတိုင်း Share ပေးနော်..။
ပြိုင်ပွဲပြီးသွားလည်း အမြဲတမ်းသီချင်းဆိုနေမှာပါဆိုတဲ့ သားငယ်.. အားပေးမယ့်သူတိုင်း Share ပေးနော်..။
Apann Pyay 11:38 AM Myanmar Idol , အဆိုတော်များ Edit
Myanmar Idol Season 1 ကတည်းက ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အိမ်ထောင်သည်လည်းဖြစ်နေတော့ အခြေအနေမပေးတဲ့အတွက် ပြိုင်ပွဲ မ၀င်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သားငယ်က Season2မှာတော့ Final ပွဲစဉ်ထိ တက် လှမ်းလာခဲ့ပြီး အိပ်မက်တွေအကောင် အထည်ဖော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ သားငယ်ကို 8days ပရိသတ်တွေ အတွက် မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Q. စပြီးပြိုင်ပွဲဝင်အတွေ့အကြုံ လေးပြောပေးပါ။
A. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဒိုင်တွေရှေ့မှာ အစမ်းသပ်ခံပြိုင်ပွဲ တစ်ခါမှမ၀င်ဖူးဘူး။ အကောင်းဆုံး ဆိုခဲ့တယ်။ ဒိုင်တွေကြိုက်တဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်။ ၁၀ ယောက်ရွေးချယ်ခံရတော့ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် ပါမယ်မထင်ထားတော့ မယုံနိုင်ဘူး။
Q. ကိုယ့်ကို အားပေးတဲ့ပရိ သတ်တွေရှိလာမယ် မျှော်လင့်ထားလား။
A. ကြည့်ရတဲ့ပရိသတ်တွေ အားပေးတယ်ဆိုတော့ ပျော်ရွှင်ရပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့သီချင်းဆိုတယ် ဆိုတာ ကြည့်တဲ့သူတွေ ပရိသတ် အသိအမှတ်ပြုမှလည်း ပျော်ရတာပေါ့။ ခုလောက်ကြီး အားပေးလိမ့် မယ်မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ မထင်မှတ်ဘဲ ခုလောက်ထိအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက် အရမ်းပီတိဖြစ်ရတယ်။
Q. ဘယ် Level က အခက်ဆုံးလဲ။
A. Level တိုင်း ကျွန်တော့် အတွက် မလွယ်ကူပါဘူး။ တစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ် စိတ်ဖိစီးမှုကလည်း မတူ ဘူး။
Q. ခုလိုထိရောက်လာတာ ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲ။
A. ပရိသတ် Voting ကြောင့် ဆိုရင် လုံးဝမမှားပါဘူး။ ကျွန်တော့် ကို Vote ပေးကြတာ SMS ရော Facebook Account နဲ့ပါ ပေးကြ လို့ ကျွန်တော် ခုထိရောက်လာတာ ပါ။ ကျွန်တော့်ကို ချစ်ကြသူတွေက ကျွန်တော် Bottom3မထိုင်ရ အောင် Vote ပေးခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီ အတွက်လည်း အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
A. ကျွန်တော့်ကိုအားပေးကြတဲ့ တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို ကျေး ဇူးတင်နေမှာပါ။ ကျွန်တော်က သီ ချင်းတွေ အမြဲဆိုနေမှာပါ။